Iska jir tiknoolajiyada OLED ee shaashadda iPhone X | Waxaan ka socdaa mac
Iska jir tiknoolajiyada OLED ee shaashadda iPhone X
Pedro Rodas | | dhowr
In IPhone X guul la gaadhay ay tahay wax aan cidna ka qarsoonayn. Dhamaanteen waan isku raacsanahay in sicirka uu yahay wax la tixgaliyo, laakiin ma gali doono arimahaas, waxaan rabaa inaan ku ekaado waxa iPhone X wuu ii gudbiyaa. Waxaan ku arkaa terminaalka fiidiyowyada waxaanan u arkaa inay yihiin wax dareen kicin kara, wax aan aniga igu dhicin oo leh alaabooyin kale oo tufaax ah oo la iibiyey.
Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay xaqiiqdu tahay in dhammaantood lagu ammaano iPhone-kan cusub, haddana waa inaan ka taxaddarnaa tikniyoolajiyadda xireysa gaar ahaan tan Super Disina Display cusub. Waa shaashad leh teknolojiyad cusub, OLED, in kasta oo astaamo kale ay sannado badan ku isticmaalayeen qalabkooda, Apple waxay sugaysay sannad-guurada tobnaad ee aabbaha dhammaan taleefannada casriga ah si loogu daro iPhone X.
Xaqiiqdu waxay tahay haddii aadan aqoon badan u lahayn mawduuca noocyada shaashadaha laga yaabo inaadan garwaaqsan, waana sababtaas tan aan u doonayo inaan wax yar ka sharaxo faa iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka shaashadan. Shaashadda OLED waxay leeyihiin faa iidada ay ku isticmaalaan tamarta yar marka pixels-yada si gooni gooni ah loo ifiyo, marka kuwa ay tahay inay muujiyaan midabka madow, haddii ay iska joogaan way leeyihiin. Si kastaba ha noqotee, haddii pixel nooca shaashadda ah uu sii jiro, soo saarida midab gaar ah hab go'an muddo dheer, waxay ku abuuri kartaa shaashadda waxa loogu yeero elektarooniga "gubasho" ama "retentions".
Tani waxay ka dhigan tahay haddii aan uga tagno sawir qaas ah shaashadda, waxay sababi kartaa in pixels uu burburo oo uu la joogo midabkii ay tarmayeen muddada dheer. On interface ka iPhone waxaan ognahay inay jiraan Dock markasta muujineysa isku mid, markaa waxay noqon laheyd bar daciif ah shaashadda. Taasi waa sababta horeyba loogu xantaay shabakada in iOS 11 Apple ay tixgelisay arintan isla markaana ay soo bandhigtay ilaalin software si pixelsku u badalo midabka iyada oo aan si cad isha dadku u arkin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Iska jir tiknoolajiyada OLED ee shaashadda iPhone X
Maqaal aad u fiican. Mahadsanid
Ku jawaab Juan Gallardo
Waad ku mahadsantahay faallooyinka. Sida had iyo jeer, Apple waxay u rogtaa daciifnimo mid ka mid ah xooggeeda, taas oo macnaheedu yahay in badeecooyinkeedu ay sii wataan sixirkaas oo dhammaanteen soo jiita. Haddii aan eegno macruufka 11 ee iPhone X, waxaan arki karnaa in isdhexgalka dib loo maleynayo inuu saameyn weyn ku leeyahay dhaqdhaqaaqa shaashadda Dock-na uu noqdo mid sabeynaya. Xitaa marka la eego in X-da xayeysiintu qarinayso, waxaan leenahay dhaqdhaqaaq midabbo leh, taasoo ka dhigeysa inay u muuqdaan inay si dhab ah u ogyihiin waxa ay sameynayaan iyo waxa ay ka hadlayaan. Loogu talagalay Apple dabcan!
Jawaab Pedro Rodas
Wax cusub qorraxda hoosteeda ma jiraan. Muddo sanado ah Panasonic wuxuu soo bandhigay nidaamka pixel orbit-ka plasmaheeda si looga fogaado inuu gubo shaashadiisa.
Sikastaba, wax walboo horeyba loo alifay.
Sidee dhif u tahay XUSUUSKA 7 AAD AYAY LEEDAHAY FARSAMO ISKU MID AH OO WALIGEEDA WUXU KU SAMEEYAA WAANA LAGU SAMEEYAA XAQIIQADA IN AY TAHAY WAKHTIGII UGU HOREEYAY EE AAN LAHAYN IN UFFF APple AY KA XUMI DOONO GALAXY S6 AY WAAYEEN OO AAD ARAGTAY IN S6 KA BADAN WELI WAY ISKU WAA ISKU WAA ISKU WAA ISKU WAA ISKU WANA DHAMMAN TAHAY INAAD TIRI LAAKIIN WAQTIGU WUXUU NOQON LAHAA -_
Ku jawaab Geovanny
Sidoo kale waa xargaha cusub ee loogu talagalay Apple Watch Series 3 iyo wixii kahoreeyay
Apple wuxuu soo saaray dhagaha cusub, urBeats3